Shirkada Afrika Oil Corp oo bilowday qodista Ceelkii Shabeel2 ee Dooxada Dharoor
Shirkada Afrika Oil Corp. ayaa waxaa ay sheegtay in ay ku faraxsan tahay bilowga howsha qodista Ceelka Shabeel North ee Puntlland, Somalia Shirkada Horn Petroleum Corp. waxaa ay hadda wadaa olalaha qoditaanka ceelkii labaad ee Soomaaliya gaar ahaan (Puntlland).
Qodista Ceelka Shabeel North waxaa howshiisa wada Horn Petroleum Corp. (“Horn”) taas Africa Oil ay ku leedahay saami dhan qiyaastii 51%. Horn waxaa ay ku leedahay saami howleeed dhan 60 % dooxooyinka Dharoor and Nugaal Valley oo ah hishiis saami wax soo saar Production Sharing Agreements(“PSA’s”) waxaa howl wadaag ay la tahay saamiga howsha shirkadaha kale ah Range Resources (20%) and Red Emperor (20%).
Ceelka Shabeel North waxaa uu bartilmaamsanayaa qaybta kore ee carada loo yaqaan (Cretaceous Jesomma) taas oo oo laga hello Oil iyo Gas sidii horay loogu arkay Shabeel 1 oo u jira 3.5 KM oo dhinac Koonfureed kaga beegan . Xeel dheerayaasha Petrophysical markii ay ku baareen godka hoose qalabka loo yaqaan Electrical logs ee Shabeel 1, waxaa uu muujiyey in uu ku jiro Oil qaybta carada loo yaqaan (Cretaceous Jesomma) ilaa in dhan 12 ilaa 20 Meter oo celcelis ahaan dhan cufnaan ah(porosity) 18 ilaa 20 %.
Qorshuhu waxaa uu yahay in Riiga dib loogu soo celiyey Shabeel 1 si loo xaqiijiyo awooda saliideed ee ka soo hoori karta , marka qodida Shabeel North la dhamaystiro, qorshaha qodista Shabeel North waxaa uu yahay in la qodo ilaa 2400 oo Meter waxaa la filaayaa in ay ku dhamaystiranto 45 maalmood ilaa 60 maalmood.
Madaxweynaha Horn iyo CEO David Grellman Waxaa uu xusay “ in ceelka Shabeel North in tijaabadiisu ay noqon doonto sidii keydkii shidaal ee ku jiray ceelka u dhow ee Shabeel 1. Waxaan filaynaa in keyd la mid ah ama ka fiican xagga cufnaata iyo qiimaha, markasta oo aan u sii socono gunta hoose ee warta Shidaalka uu fadhiyo.(basin). Natiijada ceelka Shabeel North waxaa ay naga caawin doontaa xaqiijinta baaxada isku xirnaanshaha shidaalka (Petroleum System) ee ceegaaga gunta hoose ee dooxada. Haddii lagu guulaystana waxaa ay noqonaysaa talaabo kale oo muujinaysa awoodda dhaqaale ee ceegagta gunta hoose ee Dooxada.”
Halkaan ka akhriso qoraalkii maanta ay soo saartay Shirkada Afrika Oil Corp ama Halkaan